पुरुषहरूको लागि आत्म-जाँच गर्दै! यदि यी5शरीरका अंगहरू आकार भन्दा बढि छन्, जीवन प्रभावित हुनेछ.
कम्पनी \_ 'को उत्पादन प्रोस्टेट स्वास्थ्य ध्यान (यू-सजिलो र Prostatewell) र स्पाइनल स्वास्थ्य (स्पाइनस्ट्रङCity name (optional, probably does not need) चिकित्सकीय मान्य साबित गर्दै र आफ्नो प्रोस्टेट मा महत्वपूर्ण प्रभाव छ र मेरुदण्ड स्वास्थ्य.
समय: 2019-07-29 दृश्य:
पुरुषहरूको लागि आत्म-जाँच गर्दै! यदि यी5शरीरका अंगहरू आकार भन्दा बढि छन्, जीवन प्रभावित हुनेछ
इतिहासको लामो नदीमा, दीर्घायु सधैं नै भएको छ "अन्तिम" मानव द्वारा पीछा. तथापि, त्यहाँ धेरै कम दीर्घायु हुन सक्छ. लम्बाइ यो विपरित छ "कल्पना" वैज्ञानिक कानून को. तथ्या .्कले देखाउँदछ कि विश्वव्यापी महिलाहरूको औसत आयु पुरुषहरूको भन्दा बढी छ. तिनीहरूको जन्मजात लाभहरु को अतिरिक्त, तिनीहरू वातावरण र आहारबाट बढी प्रभावित छन्.
उदाहरणका लागि, धेरै पुरुषहरुमा धूम्रपान र मदिरा जस्ता खराब बानी छ. साथै, त्यहाँ हानिकारक पदार्थहरूको एक धेरै मात्र हो, तर रक्त वाहिकाहरूमा जलन पनि, जसले हृदय रोगको जोखिममा वृद्धि गर्दछ र पुरुषहरूको आयु छोटो बनाउँछ. ध्यान दिँदा ध्यान दिनुपर्दछ निम्नलिखित5शरीरका अंगहरू आकार भन्दा बढि छन्.
1. को कलेजो ठूलो र ठूलो हुँदै गइरहेको छ.
मोटो कलेजो, मादक पेय, कलेजो सिरोसिस र अन्य रोगहरूले कलेजो ठूलो हुन सक्छ. पुरुषहरू भन्दा फेटि liver लिवरको घटना महिलाहरू भन्दा बढी हुन्छ, र अल्कोहोलिक फ्याट लिवर रोगको घटना बढ्न जारी छ. सामान्य कलेजल महँगो मार्जिन भित्र छ र यसलाई छोएर यसको उपस्थिति बुझ्दैन. यदि कलेजो ठूलो छ भने, यो हातले कलेजोको छेउमा छुनुपर्दछ, र यो पनि कलेजो रोगको घटनाको एक महान प्रतीक हो.
2. को मुटु ठूलो हुँदै गइरहेको छ
एक सामान्य व्यक्तिको मुटु उसको मुट्ठीको आकारको बारेमा हुन्छ, र शरीरको फ्याट निरन्तर बढिरहेको छ, मुटु कहिले पनि भोल्युममा बढ्ने छैन जसरी बोसो जम्मा हुन्छ. सट्टा, यो रोगले मुटुको मात्रामा परिवर्तन ल्याउँछ, विशेष गरी कोरोनरी हृदय रोग. फैलिएको हृदय रोग र यस्तै.
3. ठूलो पेट
विज्ञानले के देखाउँदछ कि पुरुषको कम्मरको घेरा भित्रै नियन्त्रण हुनुपर्दछ 85 सेमी. यदि कम्मरको परिधि मोटो हुँदै गइरहेको छ भने, हृदय रोग र फैटी कलेजोमा पीडित हुने सम्भावना बढ्नेछ. यो पेटको बोसोको अत्यधिक स to्कलनको कारण हो, जसले आन्तरिक अ organs्गहरूलाई बोसोद्वारा संकुचित बनाउँछ. विशेषत, पेटमा कलेजो बोसोले प्रभावित हुन्छ र बिस्तारै बिग्रन्छ.
एउटै समयमा, बोसो सulation्कलनले रगतको स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्दछ, रगत ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोलको स्तरमा क्रमिक वृद्धि गर्न अग्रसर गर्दछ, त्यहाँ अर्टेरियोस्क्लेरोसिस र थ्रोम्बोसिस को गठन को गति, र उच्च रक्तचाप र हृदय रोग को जोखिम समय संग वृद्धि हुनेछ.
4. प्रोस्टेट ठूलो हुँदै गइरहेको छ
प्रोस्टेट को विस्तार अक्सर hyperplasia संग सम्बन्धित छ, र मध्यम आयु वर्गका मानिसहरु को उच्च जोखिम जनसंख्या हो सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया. यदि हाइपरप्लासिया गम्भीर छ, यसले पेसामा पनि असर गर्दछ. उदाहरणका लागि, डिसुरिया लक्षणहरु मध्ये एक हो, र त्यहाँ तीव्र मूत्र प्रतिधारण हुन सक्छ, त्यसोभए प्रोस्टेट ठूलो हुँदै गइरहेको छ र ठूलो पनि चेतावनी संकेतहरू मध्ये एक हो.
को पाठ्यक्रम, प्रोस्टेट बिस्तारै ठूलो मोट हुन्छ मात्र प्रोस्टेट hyperplasia को कारण, तर प्रोस्टेट क्यान्सरले पनि हुन सक्छ. पचास वर्ष को उमेर पछि, पुरुषहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम बिस्तारै बढ्नेछ, त्यसैले प्रोस्टेट परिवर्तनमा ध्यान दिन निश्चित गर्नुहोस्.
5. घाँटी मोटो हुँदै गइरहेको छ
धेरै पुरुषको घाँटी उमेरसँग गाढा र गाढा हुन्छ, र उनीहरूले टाढाबाट पनि घाँटी हेर्न सक्तैनन्. घाँटी परिधि मा वृद्धि राम्रो कुरा होईन. यो निद्राको बिरोधमा आउने निद्रा एपनियाको कारण बनाउन सजिलो छ र एक मिनेटको लागि पनि पज. यो एक धेरै खतरनाक अवस्था हो.
घाँटीमा दिमागमा जोडिएका धेरै धमनी जहाजहरू छन्. यदि घाँटी परिधि गाढा हुँदै गइरहेको छ भने, यसको मतलव खण्डमा त्यहाँ धेरै फ्याट संचय गरिएको छ, जसले रक्त वाहिकामा क्षति पुर्‍याउँछ. समयको क्रमसँगै, एथेरोस्क्लेरोसिस हुन्छ, र सेरेब्र्रोभस्कुलर रोग पनि हुन सक्छ।
अघिल्लोके पुरुषको बुढेसकाल को संकेत गर्छ?
अर्कोLumbar Herniated डिस्क: हामीलाई के थाहा हुनुपर्दछ